Archive du 20171106
Fidangan’ny vidim-piainana Tsy voafehy intsony
Ny faran’ny herinandro teo dia nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety (izay notsongaina) ny BFM tetsy Antaninarenina, mahakasika ny fampiakarana ny « tahan’ny fampindramam-bola fototra » (taux directeur). Raha ny fanazavana nentin’Andriamatoa
Ben'ny tanànan'i Mahajanga Babon'ny HVM ?
Ela ny ela, 2 taona aty aoriana vao nahazo ny samboady amin'ny maha ben'ny tanàna azy Andriatomanga Mokthar Salim lany tamin'ny anaran'ny antoko Mapar.
Toe-draharaha andrasan’ny maro ny zotram-pifidianana hatao eto Madagasikara amin’ny taona 2018.
Gasy tia voninahitra.
Soatoavina ô, nankaiza Ianao, Sa nivadika lafy toa ilay palitao ? Ireo fahendren'ny ntaolo fahiny Nodianao tsy hita, natakalo vahiny.
Fihetsiky ny fitondrana tato ho ato Fomban’ny tsivalahara aty Afrika, hoy ny Otrikafo
Rehefa akaiky fifidianana tahaka izao, hoy ny filohan’ny antoko politika Otrikafo, Andrianjaka Rajaonah, dia matetika misy foana ny fomba fanao maloto tahaka izay nataon’ny fitondram-panjakana tato ho ato.
Fiahiana ara-tsosialy Nahazo tohana avy amin’ny CNaPS ny faritra Androy
Toy ny faritra rehetra izay efa nolalovan’ny CNaPS sy ny minisiteran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia misedra olana ihany koa ny kaominina any amin’ny faritra androy.
BAKOLINIAINA GRIFFINE Hamoaka boky mikasika ny fiainam-pirenena
Taorian’ilay boky amboaran-tononkalo mitondra ny lohateny hoe : “hetahetako” izay efa hita eny amin’ny toeram-pivarotam-boky rehetra eto an-drenivohitra dia hamoaka boky hafa mirakitra ny fiainam-pirenena indray i Bakoliniaina Griffine, mpanao gazety ara-panatanjahantena eo anivon’ny televizionam-panjakana TVM.
Trano 3 kilan’ny afo tany Antsirabe Tsy hita indray ny mpamonjy voina
Efa nampoizina fa tsy natao ho an’ny sarambabem-bahoaka ilay mpamonjy voina tokana an’ny orinasa tsy miankina ao Antsirabe fa ho an’ny karana sy ny mpanambola ihany.
Afrobasket 3 x 3 tany Togo Faha-3 ny ekipam-pirenena Malagasy
Resin’i Côte d’Ivoire 21-16 teo amin’ny lalao 1/2-dalan’ny fifaninanana Afrobasket 3 x 3 notontosaina tany Lomé Togo omaly alahady 05 novambra ny ekipa Malagasy nisy an’i Claudio, Ricky,
Telma coupe de Madagascar 2017 Cosfa sy Fosa Junior no hiatrika ny famaranana
Tontosa omaly alahady 5 novambra 2017 tany Fianarantsoa sy tany Mahajanga ireo lalao ankatoky ny famaranan’ny fifaninanana Telma Coupe de Madagascar 2017 ka nahazoana ny vokatra : Cosfa 3-2 As Adema ; Fosa Junior 2-0 Jet Mada.
Aiza ihany ilay fampanantenana nambaran’ny mpitondra ankehitriny manoloana izao fahoriana mihoampampana mahazo ny Malagasy izao ?
Tahotra ny pesta –Toamasina Nanafoana ny fahatongavany ny sambo “COSTA”
Ny fandalovan’ny minisitry ny fizahantany nihaona tamin’ireo mpandraharaha sy ny mpisehatra amin’ny fizahantany tao Toamasina ny sabotsy no nanaporofoan’ny minisitra Roland Ratsiraka ny vaovao efa nivoaka teto amin’ny Tia Tanindrazana ny amin’ny tsy hahatongavan’ny sambo mpitondra mpizahatany “Costa” ao Toamasina amin’ny diany roa voalohany amin’ity volana novambra ity.
Ahiahy amin’ny valin’ny TDR Voalevina ilay ramatoa vao voaporofo fa tena matin’ny Pesta
Hentitra ny minisitry ny fahasalamana nilaza fa ny dokotera eken’ny fanjakana ary manana ireo fitaovana manokana sy ny “Institut Pasteur” irery ihany no manamarina na tena voan’ny pesta na tsia ny olona iray.
Fandravana ny barazin’ny pesta Nahazo fahafahana vonjy maika ireo 11 lahy tratra
“Aleo fohanana ity barazy ara-pahasalamana io raha tsy vonona hifanohana amin’ny fiarovana ny fahasalam-bahoaka ny samy mpiasam-panjakana”,
Trondro ao Tsiazompaniry Nihena hatrany amin’ny 50%
Ankehitriny dia 4 taonina isan-taona sisa ny trondro azo ao amin’ny reniranon’I Tsiazompaniry, faritr’Itasy, raha toa ka 11 taonina izany teo aloha.
Vidin-tsolika Tokony ho vitan’ny fanjakana ny mampidina azy, hoy ny RNDC
Nivoaka tamin’ny fahanginany indray Rabetsara Lita filohan’ny fikambanana RNDC mpiaro ny zon’ny mpanjifa manoloana ny fiakaran’ny vidin-tsolika ny herinandro teo.
Ady amin’ny tsy fananan’asa Namoaka mpianatra teny Anglisy 200 mianadahy ny HAFARI
Tanora 200 mianadahy mpianatra teny Anglisy no indray navoakan’ny English Club hope FMOS sy ny fikambanana HAFARI Malagasy ny faran’ny herinandro teo teny Antanimena.
Sabotsin’Antongona – Imerintsiatosika Manao izay tiany ny andian-jiolahy mpangalatra moto
Manao antso avo amin’ireo manampahefana sy tompon’andraiki-panjakana ny mponina ao amin’ny fokontanin’i Sabotsin’Antongona – Imerintsiatosika fa mahatsiaro iharan’ny tsindry hazo lena.
Antsirabe II Dahalo roa matin’ny zandary, iray hafa naratra mafy
Nitrangana fanafihan-dahalo indray tao amin’ny kaominina Alakamisy-Ambano, distrikan’Antsirabe faharoa ny alin’ny zoma hifoha sabotsy lasa teo.